२६ डिसेम्बर को दिन अष्ट्रेलियामा अचम्म किसिमको चाड हुने रैछ त्यो हो बक्सिङ डे । अब यो boxing day भनेको कसैलाई मुक्का हान्ने नभएर सस्तोमा सामान किन्ने दिन रैछ । जनतालाई सस्तोमा सामान किन्न यो दिन सार्वजनिक बिदा हुदो रैछ। यो दिनमा बिशेष छुट हुनाले मान्छेहरुले पसलनै रित्ताइदिदा रैछ्न । आफ्नो रोजाइको सामान किन्न मान्छेहरु बिहान ३ बजे देखी पसल खुल्नु अगाडिनै लाइन बस्छन। जो पहिला पुगेर सामान उठायो त्यो सामान उसैको हुदो रैछ।
यहाँको ब्रान्डेड् स्टोर जस्तै Myer, Gucci, David Jones, Louis Vuitton, Giordano मा ५०% छुट हुनाले मान्छेहरु मरी हत्ते गर्दा रैछन्।
myre, Bourke Street mall अगाडि बिहान ४:४५ बजे- photo-Craig Abraham
म पनि दिउसो तिर केही सपिङ् गर्नु पर्‍यो भनेर myer मा गएको थिए । एस्तो भिड थियो कि कुरै नगरौ । आफु त दुब्लो पातलो सानो मान्छे एउटा ढोकाबाट छिरे मान्छेले घचाटेर अर्को ढोकाबाट निकाली दिए झन्डै भिडमा थिचिएर मरिएन। अब सपिङ गर्न आए पछी त केही न केही त किन्न पर्‍यो फेरी ५०% डिस्काउन्ट भएको बेला मौका पनि छोप्नु पर्‍यो भनेर अर्को स्टोरमा सर्ट रोजे । पैसा तिर्न जादा त लाइन कहाँ हो कहाँ पुगेको मेरो पालो आउन करिब आधा घण्टा लाग्थ्यो यस्तो गरी गरी के किन्नु भनेर बाइ बाइ गरेर आए।
Posted by archana at 12/26/20086comments:
अध्याराका बारेमा बात
लोडसेडिङ्ले नेपालका आइटि प्रोफेस्नल लाई खुब प्रभाब पारेको छ। जती बेला पायो तेती बेला साथी मेसेन्जरमा प्वाक्क पुक्क देखिन्छन्। नेपालमा आइटि कम्पनी खोलेर बसेका एकजना साथी नेपालको अस्ती बिहानको करिब ४ बजे तिर अनलाइन देखिन्छन्। बिहान बिहान काम गर्ने जोस देखेर के हो आज त बिहानै देखी पैसा छाप्न लागिएछ त भने मैले । के के पैसा छप्नु नि हिजो सबेरै बत्ती गयो बत्ती गए पछी के काम सुतियो अब फेरी ९:३० बजे बत्ती जान्छ त्यसैले महत्वपूर्ण ईमेल र काम सकाउन बिहानै अलाम राखी राखी उठे भन्छन। चुनावको नतिजा निस्कने ताका उनी बडा जोसिएर बुझ्नु भो अर्चनाजी अब यो प्रचण्डले केही न केही गर्छ भन्थे। अनी मैले पनि तेही कुरा सम्झेर अनी
---प्रचण्ड के भन्छन नि भनेर मैले सोधे?
गफनै बढी गर्छ।
---हा…हा.. हा …… उसो भने नेपालको पत्रीकामा नआएको नयाँ कुरा सुनाउनु न त मैले भने।
अस्ती बत्ती नजाने पालोमा पनि बत्ती गयो रे । नो लाइटमा फोन गरेर झोकिएको त नो लाइटका मान्छेले प्रचन्ड लाई फोन गर्नुस् भन्दियो रे।
त्यस्तो ठाडो जवाफ पाएपछी बिचराको बोल्ती बन्द भएछ। अब कहाँ कस्लाई फोन गरी राख्नु। अब अस्ती भर्खर प्रचण्ड आँफै मैनबत्ती बालेर मीटिङ बस्दै थिए। हा.. हा.. फेरि हासो को फोहोरा उठ्यो।
जसरी हामी सजिलै हास्यौ । लोडसेडिङ्को पिडा तेत्तिकै दु:ख दायी छ तर जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि अनेक समस्याका बाबजुत पनि समस्याको हल पूर्ण रुपले नभएसम्म आफ्नो बेस्ट दिनु नै बुद्दिमान ठहरिन्छ।
नेपालमा रहेका मेरा परिवार र साथीहरुलाई ७० घन्टे लोडसेडिङ् सजिलै सहने भगवानले शक्ति दिउन। जय जय जय धन्य छ प्रभु हाम्रो नेपाल!
Posted by archana at 12/18/2008 1 comment:
बैंकले मेरो कुरो सुन्यो
Investment Bank मा बैंक अकाउन्ट हुने लाई त थाहा नै होला internet banking को पासवोर्ड चेन्ज भएको भनेर । यस्तै बैंकका कुराहरुमा चित्त नबुझेर केही दिन अगाडि ब्लग लेखेको थिए। मलाई लागेको थियो कि यो नाथे ब्लग कस्ले हेर्ला र? तर कसरी कसरी बैंक को कर्मचारी सम्म मेरो ब्लग पुगेछ र त्यसपछी मैले पासवोर्ड पाउने आस्वासन पाए र केही दिनमै मैले पासवोर्ड पनि सजिलै पाए। अहो आफु लाई चित्त नपरेको कुराको त आवाज उठाउनु पर्ने रैछ भन्ने चेतना भयो!! एसो बैंकमा के भै रहेको छ भनेर बुझ्दा त सफ्टवेर चेन्ज गरेर त्यहाँका स्टाफलाई त ग्राहकहरुले आत्थु आत्थु पारेका रैछन। हुन पनि दैनिक जिबनमा चाहिने जस्तो कुरामा हतारो त गर्ने नै भए।
मेरो कुरा सुनेर बैंकको कस्टमर सर्भिसमा बसेकाहरु पनि मुसुक्क हास्न थाले कि? अनी धेरै लाइनमा बस्न नपर्ने गरी काउन्टर पनि बढाउदै छन् कि? जे भए पनि मलाई पासवोर्ड दिलाउन भर्पुर सहयोग गर्ने बैंकको कर्मचारी र साथी लाई धेरै धेरै धन्यबाद।
Posted by archana at 12/16/20089comments:
नेपालीपन जोगाउने ठेक्का नेपालीलाईनै
आकाना (यी गोराहरुले मेरो नाम भन्नै जान्दैनन् हामी भने यिनिहरुको भाषा सजिलै बोल्छौ यिनीहरुलाई जती सिकाए पनि नाम मात्र उच्चारन गर्न पनि कठिन छ) हो भन्दै जेस भन्ने यही बनाएकी साथीले फोन गरी र के लगाएर जान्छस भनेर सोधी छि कस्तो नेपालका आइमाइ जस्ता कही कतै जान पर्यो कि लुगा लागाउनेको ध्याउन्न भएको होला भन्ठाने। अनी एक्छिन चुप लागेर ..केही ड्रेस कोड छ र भनेर सोधे? उस्ले भनी उम्म छैन! तर त छोटो स्कर्ट घुडा भन्दा माथि, हाइ हिल भएको जुता अनी कपाल जगल्टाएको जस्तो (messy ) बनाएर आइज सेक्सी देखिन्छ, हामि पनि तेस्तै लगाउछौ भनी । मलाई त मुसुमुसु हासो उठि सकेको थियो अब यो अजिब हावा लाग्ने ठाउमा साप्रा देखाउदै स्कर्ट लगाउदा के हाल होला। त्यै पनि बादबिबाद नगरी ओके ओके भन्दै मैले हेरौला भने।
यो सबै लुगाको टन्टो क्रिस्मस पार्टीको लागि भएको थियो । क्रिस्मस आउनु अगाडिनै यहाँ करिब ५० जना IT Professional लाई भेला पारेर पार्टी दिन लागिएको थियो। त्यो पार्टीमा मलाई पनि बोलाइएको थियो। नेपालबाट प्रतिनिधि म मात्रै थिए त्यसैले मेरो जाने निस्चित नै भयो।
यो लुगाले पनि अचम्मै पार्ने रैछ। अमेरिकि राष्ट्रपतीकि श्रीमतीको पनि ओबामाले जित्ने बितिकै उनले लगाएको पहिरन, पहिरनको रङको बारेमा खुब चर्चा परिचर्चा भयो । हाम्री मन्त्री हिसिला यमीले जिन्समा सपथ खादा सबैले कुरा काट्नु काटे झन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त नेपाली पोशाक दौरा सुर्वालनै किक आउट गर्दिएर टल्कने सुटमा अमेरिका समेत पुगे। सबै नेपाली लाटाले पापा हेरेको जस्तो हेरेको हेरेयै भए। अब आफ्नो भाषा भेष भुषा कस्ले बचाउने हो । जनता सबै अनेक फेसन गर्दै हिंड्ने बिचरा नेता मात्रै किन दश ठाउँमा तुना बान्दै हिडथे त। लौ खा त भनेर सुटमै टल्कन थाले।
बरु अब दौरा, चोलो, फरिया सबै म्युजियममा राखे भयो अबका पचास बर्ष पछी नयाँ पुस्ताले देख्न पाउछन होइन भने हाम्रो राष्ट्र भाषा अङ्रेजी, खाना म. म , बर्गर, लुगा सुट जिन्स भन्न बेर छैन ।
मेरो पार्टिमा जाने दिन आयो तर मैले आफ्नो थाइ देखाउदै स्कर्ट लगाउन सकिन मैले सारी लगाउने निर्णय गरे । मेरी बहिनीले त जिस्काउदै थि अब काग को बिचमा बकुल्ला हुने होला ल्यापटप समात्ने हो कि सारी समात्ने हो भनी आ…जे सुकै होस् भनेर म सारीमै गए । म पुग्दा त धेरै जसो आइसकेका रैछन् । म ढोका भित्र छिर्ने बितिकै सबैले ताली बजाए म त लाजले भुतुकै भए। पछि पो म एकदमै फरक ड्रेसमा भएकोले सबैले इज्जत दिएर पो ताली बजाएको भने। पार्टीमा खुब रमाइलो भयो । मैले धेरै देशको IT Professional लाई भेटे र आफ्नो देशको बारेमा मैले सके जति सबैलाइ फुइ लगाए। हाम्रो देशमा बन्दुक चलाउने मात्रै होइन कम्प्युटर चलाउने पनि छन् भने र आफुले गरेको केहि प्रोजेक्ट पनि देखाए।
धेरैले खुब चाख मानी मानी म सँग फोटो खिचे कोही कोही आफ्नो देशको लुगा नलगाइ आएकोमा पछुतो मान्दै थिए। पार्टि सकियो म घर फर्केर ईमेल चेक गर्न बसे एकजना रसियाको जाभा डेभलपरको ईमेल थियो ईमेलमा “तिमी लाई भेटेर सार्है खुशी लाग्यो तिमी र म अब कहिले भेट्ने था छैन र तिम्रो अनुहार् म सम्झ्न्छु कि सम्झन्न पनि था छैन तर तिमीले लगाएको तिम्रो देशको राम्रो लुगा मेरो दिमाखमा सधैं रहि रहने छ”।
Posted by archana at 12/08/2008 10 comments:
Nepal festival -2008 in Melbourne
Federation Squire मा सधैं जसो अर्काको देशको प्रोग्राम हेर्न पर्थ्यो तर आज ईतिहासमै पहिलो पटक धुमधाम सँग मेल्बेर्नमा नेपाली महोत्सब भएको थियो।
बातावरण सार्है रमाइलो थियो। जता पनि नेपाली भेटिने, नेपाली नै सुनिने। नेपालि पहिचान देखाउन कोही कोही नेपाली सारी र दौरा सुर्वालमा आएका थिए। धेरै जसोले नेपाली टोपी लगाएर आएका थिए र टोपी नहुने हरु पनि तेही स्टलमा ५ डलरमा किन्दै लाउदै थिए।
प्रोग्राम सुरु बत्ती बालेर भएको थियो। मेल्बेर्नको हावाले बत्ती बाल्नै मुस्किल बनाइ दिएको थियो। बत्ती बाली सके पछी राष्ट्रिय गान सुरु भयो। कत्ती नेपालीलाई नयाँ नेपाली गान कन्ठ पार्न नभ्याका होलान भनेर आयोजकले ठुलै स्क्रीनमा लेखी दिएको थिए। राष्ट्रिय गान पछी नेपाली भेष भुषा लगाएर, नेपालको बिभिन्न जात जातीको पहिचान झल्कने गरेर नाच गान भएको थियो।राजु लामा को मेरो नेपाल मेरो नेपाल गाना बजाउदा त सारा नेपाली हरु आफ्नो देश प्रती माया देखाउदै सबैले गाएका थिए। बिच बिचमा नेपालको फोटो हरु slide show गरेर ठुलो स्क्रीनमा देखाउदा त खुशीले दर्शक हरुले ताली बजाउने, सिट्टी बजाउने गर्थे।
त्यस बाहेक fashion show पनि भएको थियो जस्मा नेपाली सबै जातीको भेष भुषा लगाएर स्टेजमा हिनेका थिए। अहो सबै जना आफ्नो देशको पहिरन लगाएर fashion show गरेको देखेर ताली र सिट्टी बजाएर हौसाउदै थिए। Axe Band ले गाउन सुरु गरे पछि सबै जान आ-आफ्नै तालमा नेपालको झन्डा फराउदै नाचि रहेका थिए।
आज आइतबार धेरै जसोको छुट्टी भएकोले अधिकांस नेपालीहरु आफ्नो परिवारका साथ आएका थिए। तर आज यहाँ father’s day परेको ले धेरै जसो बिद्यार्थि restaurant मा काम गर्ने हुनाले हेर्न छुटेकोमा पछुतो पनि मानीरहेका थिए।
नेपाली हरु जे प्रोग्राम गर्दा पनि झगडा गर्ने हुनाले यो प्रोग्राम मा पनि केही होला, नेपालीकै बेज्जत होला भनेर सबै लाई पिर थियो तर प्रोग्राम सार्है राम्रो र सफलता पूर्वक सकियो।
Click here to see Melbourne-nepal Festival Picture
Posted by archana at 9/07/20085comments:
IT- rewarding career
मलाई IT field एकदम मन पर्छ किनकि म सँग ल्यापटप र ईन्टरनेट भयो भने म जहा बाट पनि आफ्नो काम गर्न सक्छु। साथी, भाई, आफ्नो customer सँग च्याट बाटनै कुरा कानी हुने गर्छ्। शुक्रबार म Australian computer society ले organize गरेको seminar मा गएको थिए। सेमिनार Imperial Hotel मा भएको थियो।
IBM, fujitsu, Melbourne IT मा काम गर्ने हरु आएका थिए। सबैका संघर्श का कथा सुनियो। साच्चै सफल मानिस हुन त सार्है दु:ख पो गर्नु पर्ने रैछ।
Posted by archana at 8/31/20084comments:
आज मलाई कती बेला नेपाल को ७ बज्ला र आफ्नो बा लाई फोन गरौला भन्ने आतुरी थियो
अन्तिम घडीमा website बाट गिफ्ट अर्डर गरेको पनि पुरायो कि पुराएन खुल्दुली भै राखेको थियो। सबैले आफ्नो बाबु खुशि भएको हेर्न चाहन्छ र म पनि तेहि नै चाहन्छु।
मलाइ सम्झदा हासो उठ्छ मेरो बुबा सार्है फर्मल, एकदम नै कम बोल्ने सङै बस्दा पनि बाबु छोरिको बोल्ने टपिक नहुने। सबै भन्दा रोचक कुरो त बाबु छोरि बाटोमा भेट भै हाले पनि अपरिचित जस्तै हामि बोल्दै नबोल्ने। उहा धेरै बोल्नु हुन्थेन तर उहा बाट अनुसरण गर्ने धेरै कुरा हरु छन् । साच्ची कती युनिक है।
सुचना प्रबिधी को मज्जा - मैले अष्ट्रेलिया बाट अर्डर गरेको चिज Muncha.com ले बाउको मुख हेर्ने दिन मा घरमै पुराइदिएछ।
well its time to celebrate. finally my dad is opening gift.
It's Fathers Day, the perfect time To let you know how grateful I am For everything you do I Love You Dad
Posted by archana at 8/30/20082comments:
एउटा उखान छ नि “बोक्सी भए नि आमानै राम्रो”। जता गए पनि, जे गरे पनि आफ्नै देश राम्रो लाग्ने, आफनै देश प्रति गर्व लाग्ने, जस्लाइ भेटेपनि आफ्नै देशको बारेमा बखान गर्न मन लाग्ने। अहिले यहाँ बिशेष गरेर यि कुरा miss गरिरहेको छु ।
२) mom ले बनाएको खाना
४) न्यूरोडको C mo mo
५) आफ्नो unmanaged room
६) नेपालको बन्द / लोड सेडिङ्
७) जता जादा पनि आफ्नै time मा पुगे हुने- nepali time :)
Posted by archana at 7/31/20084comments:
अष्ट्रेलियामा पनि माग्ने
नेपालमा त चोक चोक, मन्दिर, बाटो जता ततै माग्ने देखिनु सामान्य हो। हात पाखुरा हुने, काम गर्ने सक्ने पनि लाजै नमानी मागेर बस्छ्न तर अष्ट्रेलियामा पनि सडक सडकमा माग्ने देखेर म चकित परे। तर यहाँ माग्ने स्टाईल अली फरक रैछ। माग्नेले आफ्नो केही कला देखाएर मात्र माग्ने रैछन। जस्तै कोही गीत गाउने रैछन, कोही म्युजिक बजाउने रैछन, कोही चित्र कोर्ने रैछ्न। अझै अचम्म लाग्ने कुरा त के लाग्यो भने यसरी माग्न पनि सरकार सँग लाइसेन्स् लिनु पर्ने रैछ।
रोबोट जस्तै बनेर नाचेर खुब् हसायो। मलाइ पनि dance मन परेर १ डलर दिएको त पछि यसो हिसाब गर्दा त नेपालि ६६ हुदो रैछ :)
यो दाई ले त खुब राम्रो गीत गाउने रैछ। मान्छेहरु फोटो खिच्न तछाड मछाड गर्दै थिए।
Posted by archana at 7/19/20085comments:
सित्तैमा ३००० मिनेट सम्म अंमेरिकामा रहेको आफन्त सँग कुरा
आफ्नो कम्प्युटर बाट यो वेबसाईटबाट डाइल गर्ने सफ्टवेर डाउनलोड गर्नुहोस् अनी आवस्यक दर्ता प्रक्रिया पछि तपाईंको कम्प्युटरबाट सिधै अंमेरिकामा रहेका आफन्तको मोबाईल वा ल्यान्डलाइन फोनमा डाइल गर्नुहोस् ।हालैमा ३००० मिनेटसम्म सित्तैमा कुरा गर्ने सुबिधा रहेको यसमा सफ्टवेरमा कुरा गरेको रेकर्ड राख्न सकिन्छ । त्यस्तै कम्प्युटर बाट सिधै कम्प्युटरमा त असीमित कुरा गर्न वा श्रव्य-द्रिष्य-बर्ण च्याट गर्न सकिन्छ ।अब डाउनलोड गरी आफ्नो कम्प्युटरबाट फोन को मज्जा लिनुहोस् ।
Posted by eJoshi
Posted by archana at 7/08/20085comments:
आइतवार बिशेष रुपमा यातायात मा छुट हुने रैछ। करीब ३ डलर मा दिनभर ट्रैन, ट्राम र बसमा घुम्न पाइने ।
sunday को लागि मेरो outfit - TOP OF THE WORLD EVEREST NEPAL. ठमेलमा २०० रुपियामा किनेको t-shirt. यहाँ अनेक थरका लुगा लगाउदा रैछन ईण्डियनहरुले चाँही साडी र कुर्त्ता सलवारनै लाएर हिड्दा रैछन। मुसलमानहरु टाउको छोप्ने वा बुर्का लगाउने रैछन्।
आहा!! क्या मज्जा!! यो टुरिस्ट बसमा निसुल्क सबैठाउ घुम्न पाइने। सबै ठाउ घुमाउदै त्यो ठाउ सम्बन्धि जानकारि पनि दिने रैछ। यहाँ प्राकृतिक चिज हेर्ने भनेको समुन्द्र मात्रै रैछ। त्यो हेर्न पनि टुरिस्टको घुइचो लाग्ने रैछ । हाम्रो नेपालमा जस्तो अनगिन्ती प्राकृतिक स्रोतको धनी भएको भए त झन यहाँ के हुन्थ्यो होला?
घुम्दा घुम्दा भोक लाग्यो? Gurkhas Express नेपालीहरुले खोलेको restaurant मा नेपालि स्वादको खाना खान पाउनु हुन्छ। Gurkhas Express भन्ने melbourne city मा ४-५ ओटा रैछ।
Posted by archana at 7/03/20083comments:
Northface Jacket र converse जुत्ता
केही समय को लागि आफ्नो आफ्न्त लाई भेट्न र घुम्न मेल्बर्न, अष्ट्रेलिया आएको थिए। बिकसित देश भएकोले कहिले बत्ती नजाने, चौबिसै घण्टा धारा खोल्दा पानी आउने, समयमै ट्रैन, बस आउने त भै हाल्यो, बन्द चक्का जाम केही टेन्सन नहुने, दिन रात जता घुमे पनि नहराइने त्यसबाहेक पनि नेपालीहरु ठाउँ ठाउँमा जम्का भेट हुँदा नेपालमै छु कि भन्ने भान हुने। घुम्दै जादा मलाई अचम्म लागेको कुरा के भने यहाँ नेपाली भनेर Northface jacket र panda जुत्ताले चिनिदा रैछन्। हुन पनि हरेक् नेपाली student अष्ट्रेलिया आउदा Northface Jacket र converse जुत्ता ल्याउदा रैछन। यहाँ एकदम चिसो हावा चल्दो रैछ अनि rush पनि हुदो रैछ। जे होस् तातो ज्याकेट र जुत्ताले धेरै राहत दिदो रैछ । हुन त northface को showroom Melbourne city मा पनि रैछ तर एकदम महँगो पर्दो रैछ । जो पायो तेही ले किन्नै नसक्ने महँगो पर्दो रैछ र Australian हरुले पनि jacket हेर्दै "good jacket mite!! Its good that every nepali has northface" भन्दा रैछन । नेपालबाट आएको भन्न साथ everest चढिस् भनेर सोध्द्दा रैछन्। कसैलाई त नेपाल भन्ने देश पनि छ भन्ने पनि अत्तो पत्तो छैन रैछ।
Bhuwan bhai with nothface jacket and converse shoe in federation squire.
यहाँ साझ् पख Federation Squire भन्ने ठाउँमा धेरै जसो नेपाली भेट हुने ठाउँ रैछ। त्यहा northface ज्याकेट वा पान्डा जुत्ता लगाएका नेपाली भनेर चिने हुने रैछ ।
Posted by archana at 6/27/20085comments:
आज बिहानै म बाहिर निस्केको थिए सडक सुनसान थियो। पसलहरु पनि उती सारो खुलेका थिएनन् । सबै जना आज हुने एतिहासिक गणतन्त्रको घोषणा पछी उर्लिन तयारी जस्तो लाग्थ्यो। यो तन्त्र भन्ने चिज पनि बडो गजब हुदो रैछ। समय अनुसार चेन्ज भई रहने जस्तै प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, लोकतन्त्र अब गणतन्त्र। अब यो गणतन्त्र पछी जनताको माग के हुने को त्यो त समय ले नै देखाउने छ।
हिजो सभासदहरुको सपथ ग्रहन कार्यक्रम थियो। अरु भन्दा पनि सभासदहरुको ड्रेसअप हेर्न लायकको थियो कुनै सास्कृतिक कार्यक्रम जस्तो लाग्थ्यो। मलाई त सभासदहरु ले आफ्नो मौलिक पोशाक लगाएको देखेर खुशी लाग्यो। तेस्तैमा हिसिला यमी रातो कोट र प्यान्टमा देखिइन् । यदी म सभासद भएको भए कम्तिमा पनि नेपाली ड्रेस लगाएर जान्थे किनकी नेपाल र नेपाली जनता नभएको भए सभासद कहाँ हुन्थ्यो र यस्तो एतिहासिक अवसरमा पक्कै पनि नेपाली पोसाकले आफुलाई लुट्पुटाउथे होला। हुन त लुगाले गणतन्त्रलाई केही असर नपारे पनि पाकिस्तानी नेत्री बेनिजिर भुट्टोले कहिले पनि कोट र प्यान्ट लगाएको देखिएन । उनी आफ्नो देश र रिति रिवाजको इज्जत गर्थिन त्यसैले त उनी तेती ठुलो नेत्री भइन। तेस्तै हिलारी किल्टनले पनि चुनाव अवधी भरी सभ्य लुगामा जोड दि इन् । तेही अनुरुप उनका ड्रेस डिजाईनरले कोट र लामो skirt बनाइदिएका थिए।
लौ यो भेषभुषाको गन्थन लाई थाती राखी सबैलाई आज घोषणा हुने संघिय लोक्तान्त्रिक्र गणतन्त्रको सबैलाई शुभकामना।
Posted by archana at 5/27/20087comments:
केही समयको लागि कम्प्युटर, ईन्टरनेट र मोबाईलनै नभएको ठाउँमा पुगेको थिए। मलाई त ति दिनहरु बन्धन मुक्त लागे अरुको लागि अवस्य यो कठिन छ तर मलाई केही दिनका लागि tension मुक्त दिनहरु भए ।
तामाकोशीमा हाइकिङ गर्दै।
आफ्नो सानो यात्रा बाट फर्केर आएपछी आफुलाई मन परेका २ वटा चिज गरे।
केही बर्ष अगाडि मलाई हात हेराउनेमा (Palm Astrology) खुब interest लाग्थ्यो र त्यो दिनहरुमा खुब palm astrology सम्बन्धी कुराहरु Internet मा खोजी खोजी पढे। तेती बेला जस्का पनि हात हेर्ने मन लाग्ने कुनै कुनै त ठ्याक्कै पनि मिल्थ्यो कोही कोही कुरामा चाँही रफ्फु पनि भर्नु पर्थ्यो। पछि पछि बेस्ततासँगै यि कुराहरु सेलाउदैगए। तर धेरै समय पछी मलाई फेरी हात हेराउने होइन ज्योतिश बिज्ञानतिर कौतुहल्ता बढ्दै गयो। यस्पाली मैले समय निकालेर कारिब १० जना बिभिन्न ज्योतिश सँग भेटे । सबै ज्योतिश बिज्ञानका धुरन्धुर ज्ञाता थिए।
सामान्यतय कसैले ज्योतिश बिज्ञानलाई ग्रहको गती सँगै मनुस्यको भाग्य अदल बदल हुने बैज्ञानीक आधार मानेर अत्यन्त विश्वाश गरेको पाईन्छ भने कसै कसैले यो सबै अन्धबिश्वास र रुढिबाढी कुरो भन्दै भाग्य भन्दा कर्ममा बढी जोड दिन्छन।
बिभिन ज्योतिश सँगको मेरो भेटघाट अत्यन्त रमाइलो भयो। आफ्ना भबिस्यमा हुने कतिपय गोप्य कुरा थाहा पाइयो। म गएका अधिकाश ठाउँमा भिडम भिड थिए कोही कोही ठाउमा त ६ महिना अगाडि देखी नाम लेखाउन पर्ने। (सायद नेपालका प्रधानमन्त्री लाई भेट्न पनि यति धेरै कुर्न पर्दैन होला :))
अचम्म लागेको कुरा त के भने धेरै जसो ज्योतिशकोमा त young generation को भिडभाड देखियो। धेरै जसो लाई बिदेश जान कहिले जुरेको छ। विवाह कहिले हुन्छ। पैसा कमाउन सक्छु कि सक्दिन भन्ने टन्टो हुदो रैछ्।
देखाउन आउनेमा नेता देखी अभिनेता सम्म, business man देखी house wife सम्म , जागिरे देखि बेरोजगारे सम्म आउँदा रैछन। मै हु भन्ने मान्छे पनि गुरुलाइ नदेखाइ डेक नचल्ने रैछन्।
अर्को मलाई अचम्म लागेको कुरा के भने नि १००% मा ९०% लाई त दशा लागेको हुने रैछ। राहु, केतु, उल्का, साँढे साती , संकटा त सामान्य दशा रैछ जस्लाई पनि लाग्न सक्ने । यसो सोचे देशलाइनै संकट लागेको बेला जनतालाई त आफ्से आफ लाग्ने भै हाल्यो नि । अनी अर्को कुरा यो दशा लागेको पनि treatment हुने रैछ जस्तै पूजा, पाठ, जप गर्ने र stone का औठी लगाउने। भिन्न भिन्न ज्योतिशले एउटै जन्मकुन्डली हेरेर पनि भिन्न कुरा भनेको देखेर म त दङ् परे। कस्ले भनेको पत्याउने र मान्ने निर्णय गर्नै गार्हो।
अझ अचम्म को कुरा त भन्नै बाँकी छ त्यो के भने नि टुना लगाउने जस्तै कसै को बुढा अर्की केटी सँग लाग्यो भने आफ्नै बुढा लाई टुना मुना लगएर आफ्नो बसमा पार्ने। (aaphnai budha laai aaphani basma paarna parne !!!LOL :O) साथि संगत नराम्रो छ भने, साथिहरु सँग कुरै गर्न मन नलाग्ने बनाउने, रक्सी खानेलाई नखाने बनाउने आदी, इत्यादी ।
ज्योतिशलाई हेराएर हेराउनेको भाग्य तेही अनुसार चम्कन्छ कि चम्कदैन् थाह छैन तर ज्योतिशको भबिस्य चाहि दक्षिणाले अवस्य चम्कने मैले देखे।
सरर गाडि चलाएर हिंड्ने रहर सानै देखीको हो। तेही अनुरुप गाडि सिक्दै छु । स्कुटर चलाऊन आए पनि मलाई जिन्दगी यो २ पाङ्रे चलाएर हिंड्न मन लागेन तर कार चलाएर हिंड्न पनि म तेती सजिलो देख्दिन । काठमाडौंको कच्याक् कुचुक परेको बाटो त्यही माथि धेरै सवारी साधन, भाडाको माइक्रोको हुइकाइ, बाटो हिंड्नेको भिड, पेट्रोलको ब्यापक समस्या । यसो सोच्दा त बरु हिंड्नै बेश जस्तो लाग्ने फेरी यो air pollution ले त आधा उमेर पो घटाउने हो कि अथवा कलिलै उमेरमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्ने पिरलो पनि छदैछ्।
Bloggers.com.np को प्रगती
करिब १३० ओटा blog link बाट सुरु गरेको nepalese blogger directory अहिले ५४४ ओटा पुगि सकेको छ । यि मध्य करिब ५४ जना महिला ब्लगर छन् र दैनिक् २-५ ओटा नया blogger ले आफ्नो ब्लग submit गर्छन् यस्को मत्लब नेपालि जनमानसमा ब्लगको महत्व बढ्दै छ ।
Posted by archana at 5/25/2008 8 comments:
चुनावको नतिजा धमाधम आइ रहेको छ। मावोबादीहरुले भकाभक जिती रहेका छन। जनता/ नेताहरु मावोबादीका धेरै ठाउँको जितले चित खाइरहेका छन्। झन् काग्रेस र एमालेका नेताहरु त सपना हो कि भनेर चिमोट्दा हुन्। कहिलै नाम नसुनेका झक्कु प्रशाद सुबेदीले काठमाडौं क्षेत्र नं २ बाट जित्दा त बिचरा एमालेका महासचिब माकुनेको होसै उडेर राजिनामा सम्म दिए।
राजनीतिको प्रत्यक्ष असर देशलाई परेको हुनाले होला, बच्चा देखि बुढा सम्मलाई अब के हुने होला भनेर चासोको बिषय भएको छ । झन् अहिले नेपालका ५-६ वटा टि.भी च्यानल हुनाले पनि छिन् छिन् को अपडेट फनफनि रिमोट घुमाएर हेर्न कम्ता गजप भएको छैन। नयाँबर्षको आगमन सँगै नसोचेको नतिजाले सबैलाई रोमान्चित पारेको छ कत्तिले त ठीक्क पर्‍यो अब जनताले सबैलाई ठीक पार्छन “मौका आउछ पर्खदैन, बगेको खोला फर्कदैन" भने जस्तै सबै दल लाई एक एक मौका दिईसके अब मावोलाई हेर्ने पालो भनेका छन् अब यिनले पनि गतिलो काम गरेनन् भने फेरी यिनलाई पनि जनताले घोक्राउने छन् र नयाँ नेता एंवम रुपले चुन्ने छन् ।
नयाँ बर्षमा नयाँ नेपाल बनाउनको लागि छानिएका नयाँ प्रतिनिधि र नयाँ उमङ्ग लिएर बसेका सबैलाई मेरो शुभकामना!!
Posted by archana at 4/13/20087comments:
Posted by archana at 4/10/2008 1 comment:
Everyone isastar and
deserves the right to twinkle
No matter how much work must get done,
always focus on one task atatime.
Give it your full attention, do it right and move on to the next thing.
Never get down! There will be good times and bad times. You will make good decisions and bad decisions.
Don’t let fear overtake your ability to makeadecision. Betterabad one than none at all!
The business must always come first. Do right by the business and it will do right by you.
No matter how rough the waters are, keep swimming! You only need one nostril above the water.
Developahelping attitude. Approach your business asaway to help others, whether they are customers, employees, or suppliers. If you constantly strive to help others, the profit will surely follow.
In baseball, someone who hits the ball safely three times out of ten will get into the Hall of Fame.
You don’t have to be right all the time, but as long as you succeed even once more than you fail, you win!
Always look to build the business through increasing revenues and profits. Do not count on cutting expenses asaway to grow the business. You, too, should remember the best piece of marketing advice I ever heard: “You can save your way to solvency, but you must market your way to success.”
Getamentor. Find people you can bounce ideas off of and get their input. A retired executive fromacompetitor might makeamarvelous choice, or an individual from the local chamber of commerce, orafamily friend.
You can’t do it alone. There are plenty of people who want to help and all it takes is for you to ask them.Become goal-oriented.
List all of the things you want to accomplish in business and in your personal life. Reduce these to monthly accomplishments.
Write upapersonal mission statement for your business and your life. Read it every day.If you are not proud of your company, its products, and personnel, you cannot be successful.
Hire employees who are better, faster, and smarter than you.
Being right is not important, but doing the right thing always is.
Do not let your loyalty to customers, suppliers, or employees bankrupt the business. There may be times when you have to terminatearelationship.
Let passion and commitment be your most dominant characteristics: they are infectious traits.
And finally, big three . . .
If you never give up, you can’t fail
Posted by archana at 2/21/2008 8 comments:
सित्तैमा ३००० मिनेट सम्म अंमेरिकामा रहेको आफन्त सँ...